Soo dejisan Alternate Pic View 2.650 Standart... – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaMuuqaal sawir lehAlternate Pic View
Bogga rasmiga ah: Alternate Pic View
View Pic View – sawir sawir leh oo leh dhowr fursadood oo dheeraad ah si loo saxo faylasha sawirada. Software wuxuu furi karaa qaababka muuqaalka ugu badan wuxuuna adeegsan karaa tiro fiilooyin kala duwan. View Pic View wuxuu taageertaa sifooyinka asaasiga ah ee aasaasiga ah: qalabka sawirada, saarista casaanka, sawirka isku midka ah, hagaajinta midabaynta midabka, GIF faylasha, iwm. sawirada. Software wuxuu bedeli karaa qaababka faylka oo bedelaya qiyaasta ay ku jiraan habka batch. View Alternate Pure sidoo kale wuxuu leeyahay qalab lagu qaado shaashadda iyo waxyaabaha laga soo qaado faylasha.
Sawirada iyo sawiro yar yar
Isku darka sawirrada
Qalabka asaasiga ah ee asaasiga ah
Dib-u-celinta faylasha oo loo qaybiyo
Soo dejisan Alternate Pic View
Faallo ku saabsan Alternate Pic View
Alternate Pic View Xirfadaha la xiriira